Karim Benzema Oo Farriin Qiiro Leh Mar Dhoweyd Kasoo Saaray Tegista Cristiano Ronaldo, Dibna U Gocday Wakhtigii Ay Dagaalka Ku Wada Jireen – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeWararka MaantaKarim Benzema Oo Farriin Qiiro Leh Mar Dhoweyd Kasoo Saaray Tegista Cristiano Ronaldo, Dibna U Gocday Wakhtigii Ay Dagaalka Ku Wada Jireen
Karim Benzema Oo Farriin Qiiro Leh Mar Dhoweyd Kasoo Saaray Tegista Cristiano Ronaldo, Dibna U Gocday Wakhtigii Ay Dagaalka Ku Wada Jireen
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Karim Benzema ayaa farriin qiiro leh ku sagootiyey saaxiibkii Cristiano Ronaldo, kaddib markii uu heshiis u saxeexay Juventus Salaasadii.
Cristiano Ronaldo iyo Karim Benzema ayaa sagaalkii sannadood ee u dambeeyey waxay ka wada ciyaarayeen Real Madrid, labadooda ayaana iska caawiyey goolashii ugu badnaa ee ay dhaliyeen, iyadoo Benzema uu ahaa furaha dhamaan goolasha amaba marka saddex loo qaybiyo laba ka mid ah ka shaqeeyey ama caawiyey ee uu Cristiano dhaliyey.
Wada shaqayntoodii waxay booska ka saartay Gonzalo Higuain oo aan inta badan kubbadaha siin jiray Ronaldo, isla markaana damaciisu ahaa inuu shabaqa soo taabto, hase yeeshee Karim Benzema waa shakhsi ku raaxaysta inuu asxaabtiisa la shaqeeyo oo uu u dhiibo kubbadaha isaga oo dhalin karaya.
Wakhtigoodaas wanaagsan, waxa uu sababay in ay noqdaan asxaab isku dhow, oo midba uu difaaco midka kale.
Xili ciyaareedkii hore, markii uu wakhtigu ku adkaa Benzema ee ay ku adkaatay dhalinta goolashu, waxa uu Ronaldo siiyey kubbad rikoodhe ahayd kaddib markii uu hal gool uu Benzema ka caawiyey, waxaana kaddib markii ay ciyaartaasi dhamaatay uu Ronaldo sheegay in mahadda goolka uu dhaliyey uu leeyahay Benzema.
Si kastaba ha ahaatee, Karim Benzema ayaan ka mid noqonin ciyaartooyadii Real Madrid ee shalay illaa xalay farriimaha sagootinta ah u dirayey Real Madrid, waxaana uu markiisa ku baahiyey bartiisa bulshada ee Twitterka qoraal kooban oo iskugu jira sagootin iyo gocashada xasuustii wanaagsanaa ee ay wada qaateen.
“Waanu wada guuleysanay, garoonka gudihiisa ku wada qaaddanay farxad sagaalkaas sannadood. Farxad ayay ii tahay inaanu weerarka wadaagnay. Nasiib wanaagsan ayaan kuu rajaynayaa saaxiib.” Sidaas ayuu qoraalkiisa ku yidhi Karim Benzema.